၁-၁-၂၀၁၃ နှစ်သစ်မှာရိုက်ခဲ့ တဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ၁-၁-၂၀၁၃ နှစ်သစ်မှာရိုက်ခဲ့ တဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
၁-၁-၂၀၁၃ နှစ်သစ်မှာရိုက်ခဲ့ တဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
Posted by Iris on Jan 27, 2013 in Photography | 22 comments
၂၀၁၂ နယူးရီးယားညမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Firework သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီး ချိန်းထားပေမဲ့ ညနေရောက်တော့ မိုးကသည်းသည်းမည်းမည်း ရွာပါလေရော. အဲဒါနဲ့ အိမ်မှာပဲမိုးအေးအေးနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့် လက်ဖက်သုပ်စားရင်း မိုးတိတ်မှာကို စောင့်ရင်း စောစောအိပ်ပျော်သွားခဲ့ တယ်. Firework လဲမကြည့်လိုက်ရဘူး..”Happy New Year”လည်းမအော်လိုက်ရဘူး.. ကျမ က Firework ကြည့်ရတာကို အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့လက်လွတ်လိုက်ရပြီ. စောစောအိပ်ရာဝင်ထားတဲ့အတွက် မနက်မှာလည်းအစောကြီးနိုးနေခဲ့ တယ်. ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျမ Jogging လုပ်နေကျနေရာ “Chinese Garden” ထဲကို Camera ဆွဲပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်….နည်းနည်းလောက်ပြေးလိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့နှုစ်သစ်၂၀၁၃ ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်.
အဲဒါကရေချို တွေပါ. မိုးရွာတဲ့ အခါမှာ ရေထုတ်မြောင်းတွေကတဆင့် အမှိုက်စစ်ဇကာတွေ ခံပြီး ရေတွေ ဒီကန်ထဲကိုစီးဆင်းစေပြီး လှောင်ထားပါတယ်. ကန်ကိုအမြဲပြုပြင်နေတာလဲတွေ့ မိပါတယ်.
Camera ကိုမစစ်ပဲရိုက်လိုက်တဲ့အတွက် နေ့ စွဲကမှားနေတယ်. ၁.၁.၂၀၁၃ ဖြစ်ရမှာ.
အင်း နေ့ စွဲမှန်သွားပြီ. လှပတဲ့ တံတားလေးနဲ့ ဂျပန်စတိုင်အိမ်လေး
Le Le ရေ ။
အဘ တို့ Sydney မှာလည်း Chinese Garden ရှိတယ်ကွယ့် ။
အဘ တို့ Sydney နှင့် ညီအမ မြို့တော် ( Sister City ) ခံထားတဲ့ ၊
တရုတ် မြို့ တစ်မြို့က စရိတ်ခံ ဆောက်ပေးထားတာကွယ့် ။
( စရိတ်ခံ ဆောက်ပေးတဲ့ တရုတ် မြို့ နာမည်တော့ မေ့ သွားပြီ )
Le Le တို့မြို့က Chinese Garden ကရော ၊
ဘယ်သူ စရိတ်ခံ ဆောက်ပေးထားတာလဲ ။
အဘ FR ရေ , ကျမက အဘရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ် တစ်ဦးပါ..အဘရဲ့ ခရီးသွားပို့ တွေ အကုန်နီးပါးဖတ်ပါတယ်.ပြီးတော့ Facebook မှာလည်း share ပါတယ်. အဘ FR ခွင့်ပြုမယ်လို့ လည်းယူဆပါတယ်. အဘရေ စင်္ကာပူက Government က စရိတ်ကျခံပေးတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်.
ရောက်ဖူးချင်တယ် ဘယ်မြို့မှာရှိတာလဲ ဘယ်နေရာမှရှိတယ်ဆိုတာလေးပြောပါလား။
ပုံလေးတွေကလှတယ် ဒါပေမယ့် ကျုပ်က ကွန်ပျူတာမှာ ဝေါးပေပါလုပ်ဖို့ ကြိုတ်တဲ့ပုံတွေ့ရင်
အမြဲးကူးယူလေ့ရှိတယ် အခုပုံလေးတွေက နည်းနည်းသေးနေလို့ အလုပ်မဖြစ်ဖူးဗျ။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် နောက်များမှာ ပုံကြီးတာလေးတွေကိုတင်ပေပါလားခင်ဗျ။
Mobile ရေ ကျမက Medium size ကိုရွေးလိုက်လို့ ပါ. ကျေးဇူးပါ ရှု့ခင်းလေးတွေ လှတယ်ဆိုလို့ .
အဲဒါက Singapore က Chinese Garden ပါ. တော်တော်လေး Jogging လုပ်လို့ ကောင်းပြီး Camera Men တော်တော်များများ လည်းတွေ့ မိပါရဲ့ 
မိန်းမငယ် မိန်းမလတ် ( ငယ်၊လတ် = အရွယ် ) တွေဟာ နှစ်သစ်ကူးပြီး နောက်တစ်ရက် ၊ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မှာ မနက်စောစော တောင်တက်လေ့ရှိတာ ၊ ပန်းခြံလိုနေရာမျိုးကို သွားတတ်တာ ၊ ၆၀%လောက်ရှိတယ်လို့၊ လီလီလေး ပို့ စ်ကို ဝင်ကြည့်ပြီး ကောက်ချက်ချမိသကွဲ့ 
ဝန်ခံချက် = ကိုယ်တိုင်မန့် ခြင်း ဖြစ်ပါသီ
မောင်ပေရေ. ကျမ တော့ အဲဒီ ပန်းခြံမှာ ဦးလေးကြီးတွေ အဒေါ်ကြီးတွေ လေးကျင့်ခန်းလုပ်နေ အများစုပဲလို့ ထင်တယ်
လက်ဖက်သုပ် စားပြီး စောစောအိပ်ဒယ်ဒဲ့ …
ပုံလေးတွေကို အားပေးတွားဘာဒယ်ဗျို့ …
အပေါ်ဂ မောင်ပေ ဆိုဒဲ့ လူဂျီးဂ ဘူးဂျီးဘာဗျို့ …
ဟုတ်သားပဲ အံစာတုံး ပြောတာ ဂလိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်…
သူများတွေ နှစ်သစ်ကူးကို စောစောထပြီး Jogging တဲ့။ :harr:
ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးရလိုက်သေး။ ကိုယ်က အဲ့ချိန် ဟန်းအိုဗာ။ အပေါင်းအသင်းမကောင်းတာပါ လေ။
အဲ့ဒီ က Chinese Garden ကပ်ကျော် ။
ဟီး…တခါတလေ တစ်ယောက်တည်းသွားရမှာပြင်းရင်..အခန်းဖော်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဖျားယောင်းပြီးခေါ်သွားတတ်သေးတယ်..
အဲ ဂ လို
မင်းသား။ မင်းသားနဲ့ မထင်နဲ့တော်ရေ။
အစကတော့ တူပဲ ဂျိမ်းစ်ဒင်းနဲ့ တူတယ်ရှို.
ွှအင်း…ခိုင်ဇာရေ…အခုတော့ မုတ်ဆိတ်ကြီး စွပ်ထားလေရဲ့ 
လီလီဆိုတော့ တရုတ်မလေးပေါ့နော်၊ ဦးကြောင်လည်း တရုတ်ကြီးပါပဲ။ ဝေါ်အိုက်လီ
ဦးကြောင်ရေ ကျမက မျိုးမစစ်ပါ. ဒိုဘာမင် လဲဟုတ်ဘူး တယ်ရီယာလဲ ဟုတ်ဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကျမက သူကြီးရဲ့စကားတခွန်းကိုလက်ကိုင်ထားတယ်. “All human are equality. ” cats are not included.. ဟီး ဟီး
အား ဟိ… ကျုပ်က PARC VISTA မှာနေခဲ့တာဆိုတော့ အိမ်နားက ပန်းခြံလေးကို အလွမ်းသား….
အဲသည်မှာ အတွဲတွေက ပွဲကြမ်းမှကြမ်း ဆိုတော့….
အာ ဦးကျောက် အထင်လွဲနေတာ…Camera Men တွေအများကြီးရယ်. ပြီးတော့သူတို့ ဘာသာအေးအေးဆေးဆေး အနားယူတာ မနှောက်ယှက်ချင်ပါဘူး. အချိန်လဲမပေးနိုင်ပါဘူး..ရှားရှားပါးပါးကိုယ်.အချိန်လေးကို.
နောက်ထပ် ပုံလေးတွေလည်း စောင့်နေပါဦးမယ်…
ကျေးဇူးပါ မအိ..အားပေးတဲ့သူရှိတော့ အားရှိသွားပြီ..နှောက်ယှက်ဖို့ .
နှစ်သစ်မှာ.. တချို့က..ကောင့်ဒေါင်းကိုနှစ်သက်ကြပြီး.. တချို့ကနှစ်သစ်ရဲ့မနက်ဦးနေထွက်ဆည်းဆာကို..မျှော်ချင်ကြတယ်..
တချို့ကတော့.. နှစ်ဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ၀င်ဆည်းဆာကို.. ကြည့်တာပဲ..။
လီမမက.. လူမျိုးမခွဲ..လူသားတန်းတူမှုအလေးထားတဲ့အတွက်.. နှစ်ကူးတွေရောလုပ်ပါလား..
ချိုင်းနီးစ်ရော..။ မြန်မာရော..။ အင်္ဂလိပ်ရော..။ ကချင်ကရင်ကယားချင်း နယူးရီးယားတွေရော..
သူကြီး ရေ.. အဲဒီ စကားလုံး က ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးတဲ့ စကားလုံးပါ. အဲဒီ အတွက် သူကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…….
ဧရာဝတီသူ ကျမ မှာ ကရင်သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့. ကရင်နှစ်သစ်ကူးမှာ စားရတဲ့ ကောက်ညှင်းထုတ်ကြိုးပြတ်ကို လွမ်းမိတယ်. ကချင်သူငယ်ချင်းလဲရှိတယ်.ရှမ်း. ရခိုင်.ချင်း. မွန်….ကယားတော့မရှိဘူးရယ်.